Abbootiin Gadaa Tuulamaa Dhimma Obbo Dinquu irratti maal jedhan? |
Home Afaan Oromoo Abbootiin Gadaa Tuulamaa Dhimma Obbo Dinquu irratti maal jedhan?
OMN : Oduu Guyyaa (Waxabajji 10, 2020)
Ajjeechaan Dargaggeessa Godina Baalee Aanaa Diinshoo Saadiq Haaji Ibraaim irratti raawwate qaamotuma nageenyaa mootummaatiin kan raawwatame jedhu Abbaan Saadiq, Obboleessisaa fi soddaan isaa OMN dubbise.
Ilmi koo kan ajjeefame Oromummaa isaatiin qofa jedhu Abbaan isaa Haaji Ibraahim Huseen.
I/Gaafatamaan waajira Bulchiinsaa fi Nageenyaa Aanaa Diinshoo Obbo Musaa Amaanoo Ajjeechaa Dargaggeessaa kanaa eenyu akka raawwate wanti adda baafane hin jiru jedhan.
Bulchaan Aanaa Diinshoo Hasan Inbraahim Qaamni Dargaggoo Saadiq ajjeese adda hin baane jedhan. Abbootiin alangaa aanaa fi Godinaa qorannootti jiru jedhan.
Gadaa Tuulamaatiif Abbaa Duulaa ta’anii muudamuun tajaajilaa jiru. Amaanaa itti kenname kanaan walqabatees hojiilee tokkummaa Oromoo cimsanii fi Gadaa jabeessan hedduu hojjetaa akka turan miseensonni Gadaa Tuulamaa ragaa ba’uuf. Irreecha Finfinnee jaarraa tokkoo oliif dhabamsiifamte deebisuu keessattis shoorri nama kanaa laayyoo hin turre. Dureessa Oromoo Obbo Dinquu Dayyaas.
Namni kun addunyaa horataniin kan rakkate harka qabaa, kan dhiibame simachaa, balaa biyyaa fi sabatti dhuftes qolataa akka turan ragaa ba’uuf. Hedduufis karra barnootaa fi hojii saaqaniiru.
Yeroo dhihoodhaa as Mootummaa Aangoorra jiru waliin atakaaroo keessa jiraachuutu himama. Karri Rizoortii Soodaree qabeenyummaansaa kan nama kanaa ta’es erga cufamtee bubbulteetti. Inumaa baatiiwwan darbaniif jireenya isaaniiyyuu biyya ambaatti daanga’ee jiraachuu himu namoonni itti dhiheenyaan beekan.
Rakkoon yoo jiraate akkaatuma aadaa fi duudhaa keenyaan furachuutu mala kan jedhan miseensonni Gadaa Tuulamaa, kanaan achi Orma afaan wal kaa’uun waan hin malle jedhan. Adeemsi jabaa Oromoo laamshessuun diinagdee fi siyaasa sabichaa dadhabsuuf deemamu dhaabbachuu akka qabus gaafataniiru.
Ebla 27, 2012 Abbaasaa fi obboloota isaa lama waliin rasaasa humnoota nageenyaa mootummaan kan rukutame Dargaggoon aanaa Cobii Baayisaa Disaasaa waldhaansa godhameefin fayyuu waan hin dandeenyeef miillisaa irraa muramuu maatiin OMN’tti himan.
Bulchiinsi Aanaa Cobii koree dhimma kana qulqulleessu hundeessine jedha.
Dhaabonni siyaasaa Oromoo dhaloonni kun qoqqoodinsaa fi jibiinsa akka irraa hin barannetti tokkummaa qabaachuu qabu jedhu Qeerrowwan.
Yeroo gochii sukkanneessaan Oromoorratti raawwatamaa jirurratti hoggansi wal dhagahee mari’atutu rakkoo uummataa fura jedhan.
Garaagarummaa xixinnoo ofii gola keessatti fixachuu qabu jedhu.
Ajjeechawwan Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiran dhaabbachuu akka qabu Jiraattootni magaalaa Shaashamannee gaafatan.
Mootummaan lubbuu namaa guyyaa guyyaan gaaga’amuuf sababa dhiheessuu dhiisee qaamota badii raawwatan seeratti dhiyeessuu qaba jedhu.
Ajjeeffammuu namicha guraachaa hidda dhaloota Afrikaa Jorjii flooyiiditti aansee mormii uummataa biyyoota garagaaratti godhamaa jiruun, sochiin siidaa namootaa gosumaa sanyii leellisaan barbaadeessuu itti fuffeet jira.
Ameerikaa kutaa bulchinsaa virginiyyatti siidaan Jeneraal Roobert Lii, Inglizii magaalaa Bristoolitti siidaa daldalaa garbaa guddichaa Edward Koolston fi Roobert Miiligan akkasumas biyya Beeljamittii Siidaan Mootii Liyoopoold yoo buqqifamu, kantibaan Magaalaa London sadiq Kahaan Siidaa namoota daldala garbaa keessatti hirmaatanii fi duguuggaa sanyii raawwatanii hunda qulqulleessanii barbadeessuuf waadaa seenan.
Pireezidantiin Burundii Piyeeree Nikurunziizaa dhukkuba onneen du’usaanii mootummaan biyyattii ibsa baasen beeksise.
Akka ibsi mootummaan biyyattii baase agarsiisutti pireezidantichi gaafa Sanbataa dhukkubsatani jennaan hospitaala seenani. Achiis itti wayyaa’ee tur jedhuu, garuu Gaafa Wiixataa dhukkubni onnee tasaa isaan muddee lubbuu oolchuun osoo hin danda’amin hafuu ibsi mootummaan Burundii baase balbaloomsaa .
Nikurunziizaan baatii Hagayya dhufu aangoorraa nu bu’u jedhamee eegamaa ture.
waggoota 15 darbaniif pirezidantii biyyattii ta’uun tajaajila kan turan Nikurunziizaa Bara 2015, yeroo 3ffaaf filannoo irratti nan dorgoma jechuun isaanii biyyatti hokkara hamaa kaas e ture.
Nikurunziizaan baatii Hagayya dhufu aangoorraa bu’aa jedhame eegamaa .garuu hanga 20134 nan bulchaa jechuun dubbacha ture.
Duuti pirezidantii Umriin 55 kun erga dhagahamee booda biyyattiin guyyoota gaddaa torba labsiteetti jirti .
Previous articleAbiy rejects transitional govt to solve election impasse
Next articleGudeelcha akka sabaatti nurra kaahamu, akka sabaatti of irraa darbanna!